Ityala elitsha lokuqala le-COVID-19 ye-Omicron yoxinzelelo eqinisekisiwe eJapan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » Ityala elitsha lokuqala le-COVID-19 ye-Omicron yoxinzelelo eqinisekisiwe eJapan
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Urhulumente waseJapan ubhengeze namhlanje ukuba indoda ekwiminyaka yakhe engama-30, eyavavanywa yafumana i-coronavirus esibhedlele Isikhululo senqwelomoya saseNarita, ekufikeni kwakhe eNamibia ngeCawe, wosulelwe yi-Omicron entsha eyahlukileyo yentsholongwane ye-COVID-19.
Le yimeko yokuqala eqinisekisiweyo ngokusemthethweni kwintsholongwane ye-Omicron kweli lizwe.
Ngokwamagosa esebe lezempilo, le ndoda ibingenazo iimpawu xa ilapha Isikhululo senqwelomoya saseNarita kodwa waba nomkhuhlane ngoMvulo, ngelixa amalungu amabini osapho ahamba naye avavanya ukuba akanayo kwaye avalelwe kwindawo echongwe ngurhulumente.
Japanese Inkulumbuso uFumio Kishida udibene namalungu ekhabhinethi kuquka noMphathiswa wezeMpilo uShigeyuki Goto ukuxoxa ngendlela urhulumente aza kusabela ngayo ekubhaqweni koxinzelelo lwe-Omicron Japhan, eye yabona ukwehla kwamatyala e-COVID-19.
Izolo, uKishida ubhengeze ukuba urhulumente uya kuthi ngokusemthethweni akuthintele ukungena kwabo bonke abantu bangaphandle. Uthembise ngokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza kwiinkxalabo malunga nokwahluka kwe-Omicron entsha ye-COVID-19.
Japhan sele ithathe amanyathelo angqongqo ngolo hlobo kubantu abasandul’ ukuya kulo naliphi na amazwe alithoba ase-Afrika – iBotswana, i-Eswatini, iLesotho, iMalawi, iMozambique, iNamibia, uMzantsi Afrika, iZambia neZimbabwe.
IJapan iya kunqumamisa ukunyanzeliswa kwamva nje kwezithintelo zokungena ukuqala nge-8 kaNovemba, evumele abahambi beshishini abagonyiweyo ukuba babenexesha elifutshane lokuvalelwa kwaye baqalise ukwamkela izicelo zokungena zabafundi kunye nabaqeqeshwayo bezobugcisa phantsi komqathango wokuba umbutho wabo obambeleyo uyavuma ukuthatha uxanduva esweni intshukumo yabo.
Ukuqala ngolwesiThathu, ilizwe liza kubeka umnqantsa walo wemihla ngemihla wokufika ku-3,500, ezantsi ukusuka kuma-5,000. Abemi baseJapan ababuyayo kunye nabemi bamanye amazwe baya kucelwa ukuba babe bodwa iiveki ezimbini nokuba bagonywe ngokupheleleyo.
Izolo, amatyala amatsha angama-82 aqinisekisiweyo e-COVID-19 arekhodwa kulo lonke elaseJapan, inani eliphantsi linokuba sisiphumo sokuhla kovavanyo kwimpelaveki. Igagasi langaphambili losulelo olubangelwa kukwahluka kweDelta ehlotyeni lwabona incopho yamatyala angaphezulu kwama-25,000 emihla ngemihla.